Ingcindezi yokwesula kuNdunankulu waseBritian ongawina okhethweni | News24
Ingcindezi yokwesula kuNdunankulu waseBritian ongawina okhethweni
London – Ubhekene nenkulu ingcindezi yokuthi asule esikhundleni ngoLwesihlanu uNdunankulu waseBritain , uTheresa May, kulandelwa ukulahlekelwa ubuningi ephalamende, nosekuqubule olukhulu ungabazane kuleliya lizwe njengoba kufufusa nezingxoxo zokuphuma kweBritain kwi-European Union, nosekwaziwa ngele-‘Brexit’.
Upondo wakuleliya lizwe wehlelwe amandla kakhulu ngenxa yokwesaba kokuthi lo mholi weqembu iConservative angeke akwazi ukubumba uhulumeni nokuthi kungenzeka agcine esekhishwe nasehhovisi ngemuva komkhankaso wakhe wokhetho ongaphambanga kahle nowawugubuzelwe nayizigameko ezimbili zokuhlasela kwamavukelambuso.
OLUNYE UDABA:Sekuboshwe 12 wabantu ngesehlakalo saseLondon
Ngaphambilini uMay uthe iBritain “idinga isikhathi sozinzo” njengoba ilungiselela uhlelo olunesimo sokuxaka lokuphuma ku-European Union.
Uthe yize noma imiphumela yokugcina isazophuma, iqembu lakhe kubukeka liwine iningi lezihlalo, futhi wathi kuzobaluleka ukuthi kube nesikhathi sozinzo.
Kodwa-ke umholi weqembu eliphikisayo, iLabour, uJeremy Corbyn, iqembu lakhe ebelilandela emuva ngamaphuzu angu-20, uthe uMay “usendaweni enzima kakhulu” kulandela “umkhankaso omubi”.
Ngaphambi kokuba kuphume imiphumela yokugcina, iConservatives bekuqagulwe ukuthi izowina izihlalo ezingu-319, ezehlile zisuka ku-331 ngo-2015.
Ngokwezibalo, bekubukeka sengathi angeke ikwazi ukuhlanganisa u-326 odingakayo ukuze ibe yiningi, nokusho ukuthi kuzomele yakhe umbhimbhi namanye amaqembu ukuze ikwazi ukufezekisa izinhloso zayo.